မင်းသား Henry Golding
မင်းသား Henry Golding ဟာ “G.I. Joe” ရုပ်ရှင်စီးရီးရဲ့ သီးခြားခွဲထွက် ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ “Snake Eyes” ရိုက်ကွင်းမှာ အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ချိန်မှာတော့ စတန့်သမားကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါရိုက်တာ Robert Schwentke က ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖန်တီးတဲ့ ပုံစံထက် တကယ့်လက်တွေ့ အက်ရှင် သဘောမျိုး ရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံကို သဘောကျတာကြောင့် အက်ရှင်ခန်းတွေမှာ လူစားမထိုးဘဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကနေ ထိခိုက်ပင်ပန်းရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့် ဒဏ်ရာတော်တော်များများ ရရှိခဲ့တယ်လို့ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် “Crazy Rich Asians” မင်းသား Golding က ဆိုပါတယ်။
နင်ဂျာ ကွန်မန်ဒိုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Golding က “ကျနော် မညာပါဘူး။ ကျနော် တင်ပါးထိခိုက်ခဲ့တယ်။ ခြေထောက်လည်း ပြဲသွားခဲ့တယ်။ G.I. Joe ရုပ်ရှင်စီးရီးမှာ ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးတဲ့ စစ်မှန်မှုကို လုပ်ပြခဲ့တယ်။ CGI နဲ့ ဖန်တီးတာထက် ကျနော်တို့ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်တဲ့ စတန့်တွေကို လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ရိုက်ကွင်းမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်း ပင်ပန်းခဲ့ပေမယ့် မင်းသားက သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဇွဲနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ရုံသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“Snake Eyes” ရုပ်ရှင်မှာတော့ မင်းသား Andrew Koji နဲ့ မင်းသမီး Samara Weaving တို့လည်း ပါဝင်ထားကြပါသေးတယ်။ လာမယ့် အောက်တိုဘာလမှာ ရုံတင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“Last Christmas” ဆိုတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်မြူး ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်ထားတဲ့ မင်းသား Golding ဟာ ဒါရိုက်တာ Guy Ritchie ရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ဟာသဇာတ်မြူး “The Gentlemen” ရုပ်ရှင်မှာလည်း ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ရုံတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: မင်းသား Henry Golding